Uluhlu 10.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-10
Amaxesha ama-10 etafile
1 Itheyibhile ye-10 yitafile eya kuthi isixelele iziphumo zokongeza inani elifanayo kali-10.
2 Iimpawu zetheyibhile ye-10:
Itheyibhile ye-10 yitafile eya kuthi isixelele iziphumo zokongeza inani elifanayo kali-10.
Le tafile icacisa ukuba ukuba sithatha inombolo kwaye siphinda amatyeli ali-10, Iziphumo ziya kufana nokusebenzisa ifayile ye Itafile e-10.
Masibone umzekelo: ukuba sinee-10 zeepleyiti zokutya ezixabisa iidola ezi-5 inye kwaye sifuna ukwazi ukuba zixabisa malini, siya kusebenzisa itafile ye-10, kule meko iya kuba yi-10 × 5 = iidola ezingama-50.
Uya kuyisebenzisa le tafile ebomini bakho nanini na ufuna Sazi isiphumo samaxesha ali-10 elo nani. Ungayisebenzisa le tafile ukufumana ixabiso lesuti ezili-10, ukuba isuti nganye inexabiso elifanayo.
Iimpawu zetheyibhile e-10 :
• Le tafile isinika isiphumo salo naliphi na inani eliphindaphindwe kalishumi. Ilungele amaxabiso.
• Le tafile yongeza kali-10 inani elifanayo, umzekelo u-5 × 2 = 10 uyakufana nokudibanisa umphinda-phinde ngo-10 (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2).
• Itheyibhile ye-10 iyakusinceda kubomi bethu, phakathi kwezinye izinto, ukwazi iinkcukacha ezinje ngexabiso lohambo lwenqwelomoya ezili-10 (ukuba uhambo ngalunye lufanelwe ngokufanayo), ukuba siyalazi ixabiso lohambo olu-1, kufuneka sisebenzise itafile ukusuka kwi-10 ukwazi ixabiso labo bonke.
U mzekelo :
• Ukuba sineebhasikithi ezili-10 ezineebhanana ezi-4 inye, ke siyakuba nesiphumo se-10 × 4 = iibhanana ezingama-40 zizonke.
• Ukuba sineebhasikithi ezili-10 ezineelekese ezi-6 inye, ngoko ke siya kuba neziphumo zokuphindaphinda i-10 × 6 = 60 iilekese zizonke.
• Ukuba sineebhasikithi ezili-10 ezinee-apile ezi-3 inye, ngoko ke into esiza kuba nayo kukuphindaphinda kwe-10 × 3 = ama-apile angama-30 ewonke.
Njengoko sibona, yitafile elula, ilingana nje nokongeza u-0 emva kobungakanani sifuna ukuphindaphindeka. Le thebhile ithetha inani eliphindwe kabini kali-10.